विद्यालयमा राखिने नर्सहरुले यि कार्य गर्न सक्छन् :
विद्यालयमा राखिने नर्सहरुले यि कार्यहरु गर्न सक्छन् :
१. नर्सहरुले विद्यालयमा बालबालिकालाई जस्तैः बान्ता, चोटपटक, मास हिस्टेरिया वा लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा चाहिन सक्ने बालबालिकालाई सेवा पुर्याउन र आफूले नसक्ने सेवाका लागि अस्पताल पठाउन ।
२. नर्सले विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना बनाउन सक्छन्....
जण्डिसको उपचारका लागि भुइँअमला
शरीर पँहेलो हुने रोगलाई जण्डिस अथवा पँहेले रोग भनिन्छ । रगतमा बिलिरिबीनको मात्रा बढेमा यो रोग लाग्ने गर्दछ । आँखा, छाला र मुखभित्र पहेले हुनुलाई जन्डिस भनिन्छ । यसको लागि विभिन्न उपचार गरिएको पाइन्छ र यसको समयमै उपचार भएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।< p>
मेथीका अनेकौ फाइदा
हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने मेथी स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । मेथीको सेवनले शरीरमा राम्रो कोलेस्टेरोल बढ्छ र नराम्रो कोलेस्टेरोल घट्छ । यसबाट मुटुसम्बन्धी रोग पनि कम हुन्छ ।
मेथीको सेवनले रगतमा ग्लुकोजको स्तर कम हुन्छ, जसबाट डाइबेटिजको टाइप वान र टाइप टु दुवै....
किन खाने काँक्रा ? यस्ता छन् फाइदा
– काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ, मानिसको शरीरमा पानी आपूर्ति गर्न काँक्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
– यसले शरीरमा भएको हानिकारक तत्वलाई प्रभावकारी रुपमा बाहिर निकाल्छ । मिर्गौलाको पत्थरीमा यो निकै लाभकारी मानिन्छ ।
– सूर्यको किरणद्वारा उत्पन्न हुने समस्याका लागि काँक्रो....
नखानुहोस् धेरै अचार, यस्ता छन् बेफाइदा
नियमीत रुपमा अचार खाएमा स्वास्थ्यामा नोक्सान पुग्न सक्छ । त्यसैले यदि तपाईँ धेरै अचार खाने गर्नुहुन्छ भने अचार खान कम गर्नुहोस् । अत्याधिक मात्रामा अचार सेवन गर्नाले यस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।
१. अचारमा तेलको मात्रा अत्याधिक धेरै हुन्छ र त्यसमा प्रयोग गरिने....
किन खाने धनिया?
सजिलै उमार्न सकिने धनिया स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ । धनिया भान्सामा सजिलै पाइन्छ । अचारमा होस् वा तरकारीमा धनियाको मिश्रणले स्वाद दोब्बर बढाउँछ । धनियामा औषधिय गुण पनि हुन्छ । यसमा क्याल्सियम, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैरोटिन, भिटामिन ‘सी’ लगायतका पौष्टिक तत्व पाइन्छ, जुन हाम्रो....
हरियो पालुंगोको फाइदा
पालुंगोको साग स्वास्थ्यको लागि प्रभावकारी हुन्छ । यसलाई नियमित रूपमा सेवन गर्ने मानिसले कहिले पनि अस्पताल जानुपर्दैन । यसका अनेकौ गुण छन् जसले मानिसलाई निरोगी बनाउन मद्दत गर्छ ।
१. पालुंगोमा शरीरका लागि आवश्यक अनेकौं अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, प्रोटीन, भिटामिन ए र आइरन....
सावधान!बजारमा यी औषधीहरु गुणस्तरहीन
काठमाडौं । बजारमा पाइने औषधीहरु मध्ये केही औषधीहरु गुणस्तरहिन भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा रहेको ८ प्रकारका विभिन्न औषधिहरु गुणस्तरहिन भएको जनाएको छ ।
नेपाल तथा भारतीय कम्पनीहरु द्धारा निर्मित यी औषधिहरुको नाम विभागले सोमबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरेको....
गोलभेडा सेवन गर्नुको फाइदा र बेफाइदा
१. गोलभेडाले शरीरको मृगौलाको जीवाणु हटाउने गर्छ ।
२. पिसाबमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न गोलभेडा प्रभावकारी हुन्छ । मधुमेह रोगीका लागि गोलभेडा उपयोगी मानिन्छ ।
३. गोलभेडामा कार्बोहाइड्रेट कम हुने भएकाले उत्तम भोजन मानिन्छ । गोलभेडाले पाचन शक्ति बढाउँछ ।
धुलो र गर्मीबाट यसरी जोगाउनुहोस छाला
काम गर्ने महिलालाई कामको सीलसीलामा हिड्दा जाम, धुलो, धुवाँ दिनहु जेल्नुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरुको सौन्दर्यलाई पनि असर पारिररहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले आफ्नो अंगको स्वच्छतालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
कामकाजी महिलाले गर्मीमा सुत्नुअघि आफ्नो अनुहारको धुलो, पसिना, तैलीय पदार्थलाई सफा....